Home | MFPMF
FLEGT-VPA Workshop(MDY) !!
Myanmar Forest Products Exhibition 2017
ဗေဒါသငျတနျးဆငျးပှဲ read more
Japan-Myanmar Expo 2019(Resource, Trade & Investment)
Japan-Myanmar Expo 2019(Resource, Trade & Investment) အား (၁၉-၁၀-၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ (၂၀-၁၀-၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ Yangon Convention Centre(YCC) အင်းယားလိပ်ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ဂျပန်၊ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များကို မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးရှိ တစ်ရွာတစ်ပုဒ်ဆန်းထွက်ကုန်များအား၊ (One Township, One...
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း မြောက်ဒဂုံသစ်အခြေခံစက်မှုနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းသို့ လာရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအုန်းဝင်းသည် (၁၆-၆-၂၀၁၉)ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း၊ (၃၆)ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံလမ်း၊ အမှတ်(၆၇၃)ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့်သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ သစ်အခြေခံစက်မှုနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ရာ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့်သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အမှုဆောင်အဖွဲ့တို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစောဂျွန်ရွှေဘနှင့် တာဝန်ရှိသူများ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့်သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာစိန်ဝင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများက...
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာ
စီးပွာရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကုန်သွယ်မှုလျင်မြန်ချော့မွေ့စေရန်နှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်များအား ဈေးနှုန်းစိစစ်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ...
ထိုင်းနိုင်ငံကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကြီးမှူး၍ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့တွင် Style-2019ပြပွဲအား ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၇ရက်နေ့မှ ၂၁ရက်နေ့အထိ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းထွက်သယံဇာတတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများပွင့်လင်းမြင်သာ မှုဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ MEITI (Myanmar Extractive Industries Transparency Initiative) ဒုတိယအကြိမ်နှင့် တတိယအကြိမ် အစီရင်ခံစာများပါအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ လူထုဆွေးနွေးပွဲအား မန္တလေးတိုင်းတွင် ကျင်းပခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းထွက်သယံဇာတတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများပွင့်လင်းမြင်သာ မှုဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ MEITI (Myanmar Extractive Industries Transparency Initiative) လုပ်ငန်းစဉ်များအနက်မှ...
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ ASEAN Furniture Industries Council နှင့် EU FLEGT Facility တို့ပူးပေါင်းပြီး နေပြည်တော် တွင် Seminar on “ Bridging the Gap between the...
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နှင့် Global Timber Forum တို့ပူးပေါင်းပြီး Forest Law Enforcement Governance & Trade(FLEGT-VPA)Project အား (၁-၇-၂၀၁၅) ရက်မှ (၃၁-၈-၂၀၁၅) ရက်ထိအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။...
While President of Myanmar Forest Products Merchants Federation(MFPMF) attended to World Climate Summit (COP21)which celebrated in Paris, France, from 30...
မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နှင့် Global Timber Forum တို့ပူးပေါင်းပြီး Forest Law Enforcement Governance & Trade(FLEGT-VPA)Project အား(၁-၇-၂၀၁၅)ရက်မှ(၃၁-၈-၂၀၁၅)ရက်ထိအကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
While President of Myanmar Forest Products Merchants Federation(MFPMF) attended to World Climate Summit (COP21)which celebrated in Paris, France, from 30 November to 12 December 2015.
မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောထွက် ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်၏ ညီနောင်အသင်းဖြစ်သော သစ်အခြေခံ ပရိဘောဂလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း Internation Furniture Fair (2016) ပြပွဲအား တပ်မတော်ခမ်းမ၊ ဦးဝိဇာရလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် (၁၂-၂-၂၀၁၆) ရက်မှ (၁၅-၂-၂၀၁၆) ရက်နေ့ ထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
This project completion report is made possible through the MFPMF executives, members and staff. Without their untiring efforts and team work, this project would not have been possible to complete and produce the final project completion report.
Our working committees includes Management and Office Administration, Brotherhoods Association, Foreign and Regional Affair Association, Wood-based Industry Development and Forest Development.
The 2015 United Nations Climate Change Conference was held in Paris, France, from 30 November to 12 December 2015. The European Union and 185 nations were the participating parties. The report was made by attending the conference.
Japan-Myanmar Expo 2019(Resource, Trade & Investment) အား (၁၉-၁၀-၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ (၂၀-၁၀-၂၀၁၉)ရက်နေ့အထိ Yangon Convention Centre(YCC) အင်းယားလိပ်ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့်...
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအုန်းဝင်းသည် (၁၆-၆-၂၀၁၉)ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း၊ (၃၆)ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံလမ်း၊ အမှတ်(၆၇၃)ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့်သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ သစ်အခြေခံစက်မှုနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ရာ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့်သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အမှုဆောင်အဖွဲ့တို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး...